Heerka sarrifka Forex simay: 24/05/2022 12:16
Yuan - Oo shilin Soomaali qiimaha hadda suuqa sarrifka Forex ee 24 May 2022
12:16:07 (Update heerka Forex ee 59 seconds)
1 CNY = 87.70 SOS
Yuan to Oo shilin Soomaali ayaa lagu muujiyey isweydaarsiga Forex. Heerka sarrifka 1 yuan to Oo shilin Soomaali ee isleegyada sarrifka Forex 87.70 Oo shilin Soomaali. Yuan qiimahoodu Oo shilin Soomaali cusboonaysiinta 30 sekan kasta. Heerka sarrifka qadka iyadoo leh isbeddel joogto ah oo ku yimaada sarrifka Forex.
Shaxda ganacsi Forex Oo shilin Soomaali - Yuan ku nool yihiin, 24 May 2022
Shaxda ganacsi Forex renminbi In Oo shilin Soomaali ku nool yihiin, 24 May 2022
Qariidada yuan to Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka dusheeda 24 May 2022 ”waxaa lagu soo bandhigay websaydhkeenna. Si aad si taabogal ah ula socoto yuan ilaa Oo shilin Soomaali ee Forex, waxaan ku tusaynaa jaantus. Dhammaan isbeddelada sicirka beddelka shaxanka si dhakhso leh ayaa loo ogaan karaa. Garaafka is-weydaarsiga ayaa si otomaatig ah isu beddelaya 30-sekan kasta.
Beddelaan Yuan In Oo shilin Soomaali Yuan In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka Yuan In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka
Ganacsi Online yuan (CNY) si Oo shilin Soomaali xilligan
Isweydaarsiga daqiiqad kasta boggayaga internetka. yuan wuxuu kacay 0.71 SOS daqiiqadii ugu dambeysay. Taariikhda sarrifka daqiiqadaha ugu dambeeya ayaa lagu muujiyey jadwalka. Ku dhajinta habboon ee macluumaadka daqiiqadda daqiiqadda.
87.70 87.70 87.70 87.70 87.70 87.70 87.70 87.70 87.70 87.70
Ganacsi Online yuan (CNY) si Oo shilin Soomaali ganacsi ee la soo dhaafay saac
Saacad kasta waxaan raad raacaa yuan to Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka. Isbedelka ku yimid yuan ( CNY) ku Oo shilin Soomaali saacadan. Taariikhda 10 saac ee yuan to Oo shilin Soomaali oo ka imanaya Forex jadwalka ku yaal bogga. Way ku habboon tahay in la isbarbar dhigo isbeddelada sicirka sarrifka saacad kasta.
87.70 87.70 86.99 87.70 87.70 87.70 87.70 87.70 87.70 87.70
Ganacsi Online yuan (CNY) si Oo shilin Soomaali arrimuhu maanta 24 May 2022
87.70 87.70 87.71 87.63 87.55 87.50 87.47 87.47 87.49 87.42